Yenza uxwebhu lwePDF ngokulula kwikhompyuter yakho, iselfowuni okanye ithebhulethi | Iindaba zeGajethi
Ifomathi yefayile yePDF ibe ngumgangatho ngaphakathi kwetekhnoloji, njengoko kunjalo ngeJPG, PNG, DOC, DMG, EXE ..., isebenzise kuphela ifomathi esetyenziswayo xa kuthunyelwa amaxwebhu ngombane. Isifinyezo sePDF simela iFomathi yoXwebhu oluPhathekayo, yayiqale yaphuhliswa ziiNkqubo zeAdobe (umyili omnye weFotohop) ukuba ibe yifomathi evulekileyo ngo-2008.
Olu hlobo lwefayile luqulathe naluphi na uhlobo lolwazi, nokuba kungumbhalo, imifanekiso, imifanekiso, izandi kunye neevidiyo. Ngoku ngoku sicacile ukuba iPDF yifomathi yefayile, kufuneka sazi ukuba singayenza njani. Ukuba ufuna ukwazi Uyenza njani uxwebhu lwePDF ngendlela ekhawulezayo nelula, apha ngezantsi sikubonisa onke amanyathelo ekufuneka uwalandele.
Ngaphandle kokuba ibe yifomathi evulekileyo ngaphezulu kweshumi leminyaka, khange kube kude kube malunga neminyaka emi-5, nini Zonke iinkqubo ezisebenzayo kunye nezikhangeli zibonelele ngokuhambelana kwendalo kunye nale fomathiKuba ngaphambili besinyanzelwa ukuba sikhuphele usetyenziso olusemthethweni kwiAdobe, okanye kubantu besithathu, ukuze sikwazi ukuzifunda.
Sinyanzelwe ukuba sikhuphele izicelo zomntu wesithathu ukuze senze ezi ntlobo zamaxwebhu. Ngethamsanqa, kule minyaka idlulileyo, ababhekisi phambili beenkqubo zokusebenza kunye nokusetyenziswa baye bahlanganisa kwizicelo zabo ukubanakho yenza amaxwebhu kule fomathi ngokwendalo.
Nje ukuba senze ifayile kule fomathi, kuxhomekeke kwisicelo esisisebenzisileyo ukuyenza, singavimba okanye vula ifayile yePDF ukongeza uthotho lokhuseleko ukuze ingaguquki ngaphandle kwemvume yomnini okanye abantu besithathu abangakwaziyo ukufikelela kumxholo ngaphandle kokuazi iphasiwedi.
1 Yenza amaxwebhu e-PDF kwiWindows
2 Yenza amaxwebhu ePDF kwiMac
3 Yenza uxwebhu lwePDF kwi-iOS
4 Yenza uxwebhu lwePDF kwi-Android
5 Yenza iLizwi, i-Excel, kunye ne-PowerPoint uxwebhu lwePDF
6 Yenza amaphepha, amanani, okanye uxwebhu olubalulekileyo kwiPDF
Yenza amaxwebhu e-PDF kwiWindows
IMicrosoft izamile ukwenza ifomathi yayo yeXPS njengomgangatho womzi mveliso ngaxeshanye neAdobe enePDF, kodwa njengoko bendichazile ngentla, kungasala enye kwaye ibiyileyo yenziwe yiAdobe, nangona ifomathi yeXPS ebonelelwa nguMicrosoft, inike inqanaba eliphezulu lokucinezelwa kwefayile, ingxaki esiyiyo xa kuziwa ekwenzeni iifayile kwifomathi yePDF xa kuziwa kwimifanekiso.
Eyona ndlela ilula yokwenza iPDF kwifayile kukushicilela. Windows 10, ufakelo olungagqibekanga umshicileli ogama linguMicrosoft Printa kwiPDF, umshicileli, njengoko igama lakhe libonisa, esivumela ukuba siprinte / siguqule uxwebhu lube yiPDF ngendlela elula nekhawulezayo.
Ukwenza uxwebhu ngefomathi yePDF, kuqala Kuya kufuneka ukuba siyifakile isicelo ekwakusenziwa ngalo uxwebhuNokuba liLizwi, i-Excel, iPowerPoint yamaxwebhu, okanye umbonisi womfanekiso oxhasa le fomathi yeefoto. Okulandelayo, kufuneka nje ucofe ku Printa ukhetho kwaye ukhethe umshicileli IMicrosoft Printa kwiPDF.
Nje ukuba ukhethe umshicileli, kuya kufuneka ucofe ku Printa kunye khetha isikhombisi apho sifuna ukugcina ifayile esiza kuyenza ngefomathi yePDF kwaye ucofe ku Gcina. Kulula ngoku?
Yenza amaxwebhu ePDF kwiMac
Ukwenza uxwebhu lwePDF kwiMac yinkqubo eyahlukileyo kunale siyifumanayo kwiWindows, kuba utshintsho lwefayile alwenziwa ngomshicileli. Nangona le nkqubo ayinzima, ixhomekeke kuhlobo lwefayile esifuna ukuyiguqula. Ukuba yimifanekiso akukho ngxaki kuba le nkqubo inokwenziwa ngokuthe ngqo kwisicelo Ukujonga kwangaphambili, usetyenziso lweMacOS lwendalo esinokwenza ngayo yonke into.
Ukuba sifuna ukuguqula iifoto / imifanekiso kwifomathi yePDF, kufuneka vula nge-Preview app, Zonke zidibene, kuba kungenjalo ifayile enye yePDF iya kwenziwa kumfanekiso ngamnye endaweni yokuzibeka zonke kwifayile enye. Ukujonga kwangaphambili sisicelo esingagqibekanga sokuvula imifanekiso kwi-macOS, ke kuya kufuneka ucofe kuyo nayiphi na ifayile yomfanekiso ukuze uyiqhube.
Nje ukuba siyivule imifanekiso kwisicelo sokujonga kuqala, kufuneka ucofe nje Ifayile> Thumela ngaphandle njengePDF
Ke sikhetha ifolda apho sifuna ukugcina ifayile ngenxa yoguqulo kwaye ucofe ku Gcina.
Yenza uxwebhu lwePDF kwi-iOS
Iqonga le-Apple elihambayo, i-iOS, ikwasivumela ukuba senze amaxwebhu ngefomathi yePDF, nangona ixhomekeke kwisicelo esisisebenzisayo ukuyenza. Ukudala amaxwebhu okubhaliweyo, i-spreadsheet okanye iintetho, usetyenziso esivule ngalo kufuneka luhambelane netekhnoloji ye-AirPrint. Ukuba kunjalo, xa sicofa kwiPrinta ukhetho, Iya kusivumela ukuba sigcine uxwebhu ngefomathi yePDF.
Ukuba awuyixhasi itekhnoloji ye-AirPrint, Kuya kufuneka sisebenzise izicelo zomntu wesithathu. Enye yezona zinto zilungileyo esinokuzifumana kwiVenkile ye App Umshicileli weProjekhthi. Nje ukuba siyifakile, kufuneka ucofe nje kwiqhosha lokwabelana lesicelo esikuso kwaye ukhethe ulwandiso lwegama elifanayo.
Ukuba sinomshicileli ohambelana ne-AirPrint, oku kuya kuboniswa kunye naleyo ifakwe sisicelo eso ivumela ukuba senze amaxwebhu ngefomathi yePDF.
Ukusuka kwiSafari ye-iOS, sinokugcina gcina umxholo oboniswe kwisikhangeli kwifomathi yePDF Ngokwendalo kwaye ngaphandle kokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu.
Yenza uxwebhu lwePDF kwi-Android
I-Android iyasivumela ukuba senze ifayile kwifomathi yePDF kuso nasiphi na isicelo ngaphandle kokubhenela kwizicelo zomntu wesithathu, nangona njengesiqhelo, sinokuzifumana kwiVenkile yokudlala. Inkqubo yokuguqula ifayile ibe yifomathi yePDF ilula kakhulu, kufuneka silandele nje la manyathelo:
Okokuqala, nje ukuba sivule isicelo, cofa kwindawo okhetha kuyo Yabelana.
Emva koko, cofa apha yokuprinta.
Emva koko, cofa ku Khetha umshicileli kwaye usete Gcina kwiPDF njengomshicileli.
Yenza iLizwi, i-Excel, kunye ne-PowerPoint uxwebhu lwePDF
Ukuba into esiyifunayo kukuguqula uxwebhu lokubhaliweyo, ispredishithi okanye intetho eyenziwe zezinye zezicelo eziyinxalenye yeOfisi, akukho mfuneko yokuba ubhenele kwizicelo zomntu wesithathu kwaye ayinamsebenzi ngqo nenkqubo yokusebenza esikuyo. ukwenza okanye ukuvula uxwebhu, kuba zonke, zombini iLizwi kunye ne-Excel kunye nePowerPoint, zisivumela yenza amaxwebhu kwifomathi yePDF kwisicelo sesicelo ngokulandela la manyathelo:
Ukugcina uxwebhu kwifomathi yePDF, kufuneka ucofe nje Ifayile> Gcina njenge kwaye kwifomathi yefayile khetha iPDF, simisela ifolda apho sifuna ukuyigcina kwaye ucofe kuThumela ngaphandle.
Yenza amaphepha, amanani, okanye uxwebhu olubalulekileyo kwiPDF
Njengakwi suite yeOfisi, ukuba sifuna ukwenza uxwebhu kumaphepha, amanani okanye i-Keynote ukuze kamva siyiguqulele kwiPDF, singayenza ngokuthe ngqo kwisicelo ngokwaso. Kufuneka sivule uxwebhu ekubhekiswa kulo. Emva koko cofa apha Thumela ngaphandle> kwiPDF kwaye sibeka indlela apho sifuna ukugcina ifayile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani uxwebhu lwePDF